Tsy feteza-maty - Wikipedia
Ny tsy feteza-maty na tsy fahafatesana dia ny fahavelomana tsy manam-petran' ny fanahin'olombelona aorian' ny fahafatesan' ny vatany. Izany dia endriky ny fiainana izay tsy azon' ny fahafatesana, atao hoe fiainana aorian'ny fahafatesana ara-batana na ara-panahy, ka mety ho voa-janahary izany na amin'ny heviny am-panoharana na amin'ny lafin-javatra hafa. Isan'ireo lohahevitra iadian-kevitra sady tsy ifanarahan'ny maro amin'ny tantaran'ny olombelona na amin'ny lafiny antropolojika, na ara-pinoana sy fivavahana, na amin'ny ara-kolontsaina izany. Ny fampianarana ny amin'ny tsy feteza-matin'ny fanahy dia iraisan'ny fivavahana maro. Miseho amin'ny endrika maro anefa izany arakaraka ny kolontsaina, ka mety ho fahaveloman'ny fanahin' olombelona amin'ny farany izany na miaraka amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty.
Ao amin' ny hindoisma dia ny fiteleman' ny "fanahy itambaran' ny zavatra rehetra" ny fanahin' olombelona no tanjona farany. Ny fampianaran' ny bodisma dia mampanantena ny nirvana, dia ny fahasambarana fara tampony noho ny fanjavonan' ny maha-izy ny olona tsirairay. Tao amin' ny fivavahan' ny Egiptiana tamin' ny Andro Taloha dia miankina amin' ny fitsaran' ireo andriamanitra ny fiainan' ny olona no ahazoana na tsia ny tsy fahafatesan' ny fanahy. Ao amin' ny fedrà grika dia mitohy ao amin' ny fanjakana ambanin' ny tany atao hoe Hadesy ny fisian' ny fanahin' olombelona
Ao amin' ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo dia misy ny fampanantenana ny tsy fahafatesan' ny fanahin' olombelona. Miavaka amin' ny jodaisma ny fivavahana kristiana sy silamo satria mampianatra fa aorian' ny fitsanganan' ny tena ho velona sy ny fitsarana ny olombelona rehetra dia hitambatra amin' ny vatana ny fanahy ka hahazo ny valin' ny natao izay mety ho valisoa na fanamelohana. Mifandray amin' ny fiainana mandrakizay izany. Ao amin' ny jodaisma dia amin' ny fiavian' ny Mesia no hisehoan' ny fiverenan' ny fanahin' olombelona ho velona indray.
Fiainana aorian'ny fahafatesana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsy_feteza-maty&oldid=994004"
Voaova farany tamin'ny 18 Jolay 2020 amin'ny 07:53 ity pejy ity.